Apple Watch nijirika sy nametraka 'Flappy Bird' sy 'Canabalt' | Avy amin'ny mac aho
Apple Watch voajirika indray ary nametraka 'Flappy Bird' sy 'Canabalt'
Hatramin'ny namoahana ny watchOS 2.0 dia nanakorontana ny rindrambaiko ny mpamorona isan-karazany ary nahazo ny lalao kilalao toa azy ireo 'Canabalt' y 'Vorona Flappy', miasa tsara teratany ao amin'ny Apple Watch, mampiasa rafitra toy ny UIKit sy SpriteKit, izay Tsy azo zahana ho an'ny mpamorona fampiharana Apple Watch.
Ny iray amin'ireo singa lehibe nampidirin'i Apple ho an'ny watchOS 2 dia ny fahafahan'ny mpamorona mamorona rindranasa teratany mihazakazaka Apple Watch, tsy mila iPhone. Saingy rehefa hita fa tsy afaka mampiasa ny rafitra mandroso kokoa hita ao amin'ny fampiharana iPhone toa ny UIKit, SpriteKit, ary SceneKit ireo mpandrindra.
Ny herinandro lasa teo, ireo mpamorona Steven Troughton-Smith, Adam Bell, ary Jay Freeman (saurik), afaka nametraka rindranasa izy ireo, tamin'ny alàlan'ny UIKit sy SceneKit, mba hampandeha tsara ny rindranasa, araka ny antsipirianay momba an'io lahatsoratra. Ao amin'ny horonantsary etsy ambany, asehonay anao ny mpihazakazaka tsy misy farany 'Canabalt', aseho amin'ny fomba miasa tanindrazana ao amin'ny Apple Watch.
Hamza Sood, developer, dia nilalao niaraka tamin'ny watchOS 2 ihany koa, ary nibitsika fa afaka nametraka tamina tanindrazana tamin'ny Apple Watch, a Flappy Bird clone. Nandeha lavitra ihany koa izy, ary nilaza fa afaka izany milalao amin'ny fikasihana, Y fanaraha-maso ny satroboninahitra nomerika.
Nanapaka clone Flappy Bird ao amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny fandikana SpriteKit teratany, fanaraha-maso / fehiloha satana, SFX amin'ny alàlan'ny mpandahateny pic.twitter.com/U1cavXb7SN
- Hamza Sood (@hamzasood) Jona 16, 2015
Mbola ny mpamorona tsy mahazo alalana avy amin'i Apple izy ireo, ireo fampiasa amin'ny fiambenana ireo, fa ny lalao voajirika, manome topy maso ny zavatra mety ho vitan'ilay fitaovana amin'ny ho avy. WatchOS 2, kasaina havoaka ao amin'ny latsaka, hamela ireo mpamorona hamorona fampiharana natiora Miara-miasa amin'ny famantaranandro izy ireo, fa tsy ny iPhone, fa tsy misy ireo frame nampiasaina tamin'ireo ohatra teo aloha. WatchOS 2 dia manome ny mpamorona fidirana amin'ny Satroboninahitra nomerika, ny mikrô, ary ireo sensor isan-karazany amin'ny famantaranandro, ao anatin'izany ny ny fanaraha-maso foibe, accelerometer.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Apple Watch voajirika indray ary nametraka 'Flappy Bird' sy 'Canabalt'
Ireo vanin'i Apple Maps dia mitohy hita any UK
Avereno indray ny rakitrao raha tsy manomboka ny Mac na tsy mampiseho sary